मुलुकको बिषम् परिस्थिती: उबासंघ चितवनको नयाँ नेतृत्वको चुनौती – Saurahaonline.com
मुलुकको बिषम् परिस्थिती: उबासंघ चितवनको नयाँ नेतृत्वको चुनौती
बिशाल सापकोटा/चितवन/बिचार बिश्लेषण
मुलुकको पछिल्लो घटनाक्रम
१० बर्षे संक्रमणकाल पछि बनेको नयाँ संबिधानले मुलुक सुदृढ, अग्रगामी बिकासको दिशा तर्फ अगाडी बढ्छ भन्ने जनअपेक्षा छिया छिया भएको छ । बैशाख १२ गतेको भुकम्पले क्षत बिक्षत बनेको मुलुकलाई नयाँ संबिधानले यथष्ठ मर्मत गर्छ भन्ने जन आशा धेरै दिन टिक्न सकेन ।बरु जारी भएको नयाँ संबिधानसँगै अनेक अनेक समस्या उब्जिएका छन । मुलुकको सार्वभौम संविधानसभाले जारी गर्ने संविधानको सबैले स्वामित्व ग्रहण गर्नुपर्छ, त्यसप्रति असन्तुष्ट दल र समूहले राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि ठानेर संवाद र सहमतिका माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ ।
तर बिगत ६ महिना देखि मधेसीबादी दलले नयाँ संबिधानले मधेसीको अधिकार कुण्डित गरेको भन्दै अधिकार प्राप्तिका नाम आन्दोलन गरिरहेका छन । तराईका जिल्लाहरुमा असन्तुष्टिका नाम चलेको संघर्षका क्रममा निकै बिभत्स घटनाहरु पनि घटे /र त्यो क्रम जारी नै छ ।
त्यहि बिचमा परेको चुनाबमा “नेपाली नाकाहरुबाट घुसपैठ हुन सक्ने“ दलिल पेश गर्दै नेपालको नयाँ संबिधान घोषणाबाट असन्तुष्ट बनेको भारतले भु–परिबेष्ठित मुलुकले पाउने पारबहन सुबिधाको समेत हेक्का नराखि अघोषित रुपमा नाकाबन्दि सुर गरिदियो ।
नाकाबन्दिलाई भारतले सहर्ष नस्वीकारे पनि ‘संबिधानमा आफ्नो पनि असन्तुष्टी रहेको’ जनाउ उसका दुतहरुले बेला बेलामा जारी गरेका बिज्ञप्तिले दिए । यस अबधिमा ‘मधेसीबादी दलको आन्दोलनमा भारतको पनि आन्तरिक सहयोग छ ‘भन्ने सबै सामु सपाट उत्रिएको छ ।
‘आफ्ना स्वार्थलाई मधेस आन्दोलनको सहयतालाई पुर्ति गर्ने उद्देश्य भारतले लिएको हो’ भन्ने बिश्लेषण पुरानो भईसक्यो । यीनै पछिल्ला घटनाक्रमले मुलुकको अर्थब्यवस्था डामाडोल छ । पर्यटन क्षेत्र, उद्योगधन्दा ठप्प प्रायः छन । ईन्धन, ग्यास, औद्योगिक कच्चा पदार्थ सबै भारतबाटै ल्याउने पर्ने बाध्यकारी स्थिती छ । त्यसैले पनि नाकाबन्दि र आन्दोलनको स–प्रभाब सबैतिर छ ।
असन्तुुष्ट पक्ष, समुह, दललाई यथोचित सम्बोधन गर्नु राज्यको कर्तब्य हो । तर बर्तमान के.पि. शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार शिथिल प्रायः छ । उसका बाणिहरु नै कतिपय समस्याका कारक बनिरहेका छन । जम्बो मन्त्रीमण्डल, ६र६ जना उपप्रधानमन्त्री, राजनितीक कटाक्षपुर्ण भाषण बाजी, असम्भबपुर्ण आश्वासन ओली सरकारको बिशेषता बनेको छ । आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ संबिधान जारी गरेको नेपाली काङ्ग्रेसले प्रतिपक्षमा बसेर तमासा हेरिरहेको छ । पछिल्लो क्रममा संसदमा संबिधानको संशोधन बिधेयक पेश भएपछि धेरै नाकाहरुमा केहि सहजता भएपनि ७० प्रतिशत भन्दा बढि आयात हुने मुख्य बिरगंज–रक्सौल नाका अझै ठप्प छ ।
चितवनको बर्तमान अवस्था
कृषिलाई केन्द्रमा राखेर अगाडी बढिरहेको चितवन पनि नाकाबन्दी र मधेस आन्दोलनको प्रभाबमा पर्यो । औद्योगिक कच्चा पदार्थको परनिर्भताले यहाँका उद्योगहरु पनि बन्द हुने क्रममा छन । पोल्ट्रि फिड उद्योगलाई आवश्यक ८० प्रतिशत कच्चा पदार्थ भारतबाट आउने गर्दथ्यो । जुन अहिले नआउँदा दाना उत्पादन बन्द भएर कुखुरा ब्यवसायीहरु संकट बेहोरिरहेका छन ।
यहाँका केरा ब्यवसायीहरुको समस्या पनि कम छैन । ईन्धनको अभाबले ढुवानीमा चर्को मुल्य तिर्न बाध्य छन चितवनका केरा कृषकहरु । त्यसो त उदाहरणका रुपमा कुखुरा र केरा ब्यवसायीलाई पेश गरेपनि अन्य क्षेत्रमा परेको संकट कम भने छैन । पर्यटकिय नगरी सौरहामा पहिले जस्तो चहलपहल छैन । ईन्धन, ग्यास, औद्योगिक कच्चा पदार्थको अभाबले होटल ब्यवसायी दाउरा बालेर जेनतेन गुजारा गरिरहेका छन ।
समग्र चितवनको देहाय उपभोग गर्ने क्षेत्र थिलो थिलो बनेको छ । यहि बिचमा भएको उद्योग बाणिज्य संघ चितवनको ४९ औँ साधारण सभा तथा अधिबेशनले चुनेको नयाँ नेतृत्वमा चुनौतीका भारि नै छन । कृषिमा आश्रित यहाँका जनतालाई यस्तो संकटका बेला उ.बा. संघ चितवनको नयाँ नेतृत्वले कस्तो गुरु योजना बिकसित गर्छ भन्ने मुख्य चासो छ ।
उद्योग बाणिज्य संघ चितवनको नयाँ नेतृत्वको चुनौती
यस्तो बिषम् परिस्थितीमा चितवनको समग्र आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक विकास गर्दै उद्योग व्यवसायको प्रवद्र्धनमा उ.बा.संघ को नयाँ नेतृत्वको प्रभाबकारी भुमिका आवश्यक छ । आयातमा परेको कठिनाई ले सुनसान बनेको यहाँको पर्यटन प्रवद्र्धन र बिकासमा उद्योग बाणिज्य संघले अख्तिार गर्ने योजना अपेक्षाका बिषय मध्य कै हुन । मजदुर, किसान, बुद्धिजिवि, पूँजिपति सबैलाई एकत्रित गराउन राजन गौतम (उद्योग बणिज्य चितवनको नयाँ बिजयी अध्यक्ष) कत्तिको सफल हुन्छन? त्यो हेर्न बाँकी नै छ । चुनाब अघि बनेका प्यानलको मत परिणाम उलटपटल भएको छ । प्रचार प्रसार र चर्चा भएभन्दा फरक मत परिणाम आएको छ ।
अध्यक्ष बाहेक पदाधिकारी र कार्यसमितीमा गौतमका प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका प्रधान प्यानल समुहको बर्चस्व रहने गरि परिणाम आएको छ । बरिष्ठ उपाध्यक्षमा बिजयी भएका राजु श्रेष्ठ अध्यक्षका प्रत्यासी रहेका सहनलाल प्रधानको प्यानल बाट चुनाबी मैदानमा उत्रिएका पात्र हुन । वाणिज्य र उद्योग तर्फका बिजयी उपाध्यक्ष क्रमशः चुननारायण श्रेष्ठ र सुमनकुमार श्रेष्ठ पनि प्रधान प्यानलकै रुपमा सर्बत्र चिनिएका छन । कार्यसमिती, बाणिज्य, उद्योग तर्फका सदस्यहरुमा पनि प्रधान प्यानलका प्रतिनिधी बिजयी भएका छन ।
यस्तोमा नेतृत्वकर्तालाई संयोजन गरेर लैजाने चुनौती छ । त्यसो त नयाँ कार्यसमितीका पदाधीकारीहरुको हर किसिकको सहयोग बिना अध्यक्ष पद्मा बिजयी भएका गौतम एक्लैले एक्लैले केहि गर्न सक्ने स्थिती रहँदैन । नेतृत्वमा पुगेका सबैले पद् र ब्यक्तिबादी भन्दा माथि उठेर चितवनको औद्योगिक बिकास बारे सोच्नु पर्ने देखिन्छ ।
नयाँ नेतृत्वको गुण–अबगुणको कालान्तरमा समिक्षा हुने नै छ । चुनिएको नेतृत्वले नाताबाद र कृपाबादको भनक पनि दिनु हुँदैन । पराजित पक्षले पनि बिजयी नेतृत्वलाई उत्तिकै रचानात्मक सहयोग गर्नु आवश्यक छ । नयाँ कार्यसमितीले नेतृत्वका लागी नेतृत्व नभई काम गर्नका लागी नेतृत्व लिएको महसुस गराउने किसिमका योजना अगाडी सार्नु पर्छ । अनि मात्र समृद्ध चितवनको सपना साकार हुनेछ ।
–लेखक रेडियो अर्पणका समाचार प्रमुख हुन ।